Xildhibaan reer Somaliland ah oo dhagax lagu dhaawacay - Caasimada Online
Home Somaliland Xildhibaan reer Somaliland ah oo dhagax lagu dhaawacay
Hargeysa (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa sheegaya in saaka oo Arbaca ah si xun loogu dhaawacay magaaladaasi Xildhibaan Nuur Guruuje oo ka tirsan Golaha Wakiillada ee maamulkaasi.
Suldaan Saleebaan Boqor Cismaan oo ka mid ah madaxda Dhaqanka Somaliland ayaa lagu soo warramayaa inuu dhaawac gaarsiiyey xildhibaanka, isagoo dhagax uga dhuftay madaxa.
Labada nin ayaa la sheegay inuu ka dhexeeyey dagaal dhinaca afka ah, iyaga oo horey eedo kulul isugu mariyey warbaahinta, kaas oo sababay gacan ka hadal-kooda.
Sawirro laga soo qaaday xildhibaanka, kadib dhacdada ayaa muujinaya isaga oo uu dhiig fara badan ka socda madaxa, kadibna loogu duubay shaatigiisa, iyadoo dad badan ku soo xoomeen goobta, kuwaas oo isla markiiba caawimaad deg-deg ah u fidiyey mas’uulkaasi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in haatan xaaladda caafimaada ee xildhibaanka lagula tacaalayo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
“Waa nasiib darro in xildhibaan Axmed Nuur Guruuje lagu fara-saaro Magaalada Hargeysa oo loo geysto dhaawac, sida sharciga ku xusan haddii gacan ka hadal dhaco oo qof waxyeelo qof kale waa dambi, sidaas awgeed waa in la xiraa lasoo xiro oo maxkamad la horgeeyo“ ayuu yiri Guddoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada oo ka hadlay falkaasi
Dhanka kale illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee Somaliland oo ku aadan falka lagu dhaawacay xildhibaankaasi.
Dhacdadan ayaa la yaab ku noqotay dad badan oo Soomaaliyeed, waxaana ay keentay in si aad ah looga hadal hayo baraha bulshada oo lagu baahiyey sawirrada xildhibaankaasi.